London: R/Wasaaraha oo booqatay Masjidka Finsbury Park iyo wararkii u dambeeyay – Kasmo Newspaper
London: R/Wasaaraha oo booqatay Masjidka Finsbury Park iyo wararkii u dambeeyay
Updated - June 19, 2017 3:28 pm GMT
London (Kasmo), Weerar argagixiso oo gaari Van ah oo cad lagu jiirsiiyay dad muslimiin ah ayaa ka dhacay xalay saqdii dhexe agagaarka Masjidka Finsbury Park ee woqooyiga London oo ah goobaha Soomaalidu ku badantahay.
Dadkaas oo ka soo dareeray dhammaadkii salaadda Taraawiixda waxaa gaariga jiirsiiyay nin caddaan ah ,(Sawirka), iyaga oo ku sii jeeda Xarunta “Muslim Welfare House” oo ku dhow Masjidka.
Darren Osborne oo 47 jir ah, reer Cardiff 4 carruur ahna leh, waxaana la sheegay in qaar ka mid ah culimadii Masjidka iyo dad kale ay ka badbaadiyeen dhallinyaradii caraysnayd oo goobta ku qabatay, ka hor intii Boliiska oo goobta soo gaaray an lagu wareejin.
Boliisku waxay caddeeyeen in ninka falka gaystay an horey loo aqoon, iala markaasna loo malaynayo in uu kaligiis ku yahay. Warar an la xaqiijin ayaa ka warramaya jiritaanka 2 nin oo kale oo qayb ka ahaa weerarka, laakiin ka baxsaday goobta.
Khasaaraha rasmiga ah waxaa lagu sheegay 1 qof oo dhimasho ah iyo 10 dhaawac ah oo 2 ka mid ah goobta lagu dabiibay, 8dii kalena Isbitaallada la seexiyay. Dhacdada ayaa loola tacaalayaa sidii fal argagixiso oo la mid ah kuwii London Bridge iyo Manchester.
Subaxnimadii horaba, dad fara badan oo diimo kala duwan caabuda ayaa ubaxyo dhigayay goobtii weerarku ka dhacay, si ay u muujiyaan in ay ka soo horjeedaan falalka nacaybka ku dhisan ee kala qaybinaya bulshada London.
Ra’iisal Wasaare Theresa May oo horey u qabtay dhaliilo badan ayaa si degdeg ah u booqatay Masjidka, waxayna ka qayb gashay kulan caqiidooyinka kala gadisan loogu qabtay Masjidkaas, iyada oo ammaan u jeedisay dadkii gacanta ku dhigay dambiilihii falka gaystay.
Hoggaamiyaha Labourka Jeremy Corbyn oo isagu ah xildhibanka degaanka wax ka dheceen ayaa saaka inta badan ku sugnaa “Muslim Welfare House” oo ah meesha weerara lagu qaaday. Golaha Muslimiinta Britain ayaa cambaareeyay weerarka argagixiso oo lagu qaaday dad an waxba galabsan.
Duqa London Saddiq Khan iyo Taliyaha Boliiska, Cressida Dick oo shir jaraa’id qabtay saaka ayaa carrabka ku adkeeyay in weerarku ahaa mid argagixiso oo lagu qaaday bulshada Muslimka ah, isla markaasna an loo dulqaadan doonin.
Mas’uuliintu waxay ballan qaadeen in nabadgalyada goobaha lagu cibaadaysto, gaar ahaan Masaajidyada, si aad ah loo xoojin doono maalmaha soo socda oo lagu soo dhowaanayo Ciiddii barakaysnayd.
Kooxaha xagjirka caddaanka ah ee “White Supremtists” ayaa weerarka soo dhoweeyay, sida laga soo xigtay Barta Internetka “Site” ee dusha kala socota xagjirnimada.
Waxaa kale oo ay sheegeen in xitaa taageerayaasha Daacish u siticmaalayaan dhacdada sidii ay u kicin lahaayeen bulshada Muslimiinta ah.